स्वस्तिमाजी चाहिँदा आफै कुद्ने, नचाहिँदा पारो चढ्ने ? – Mero Film
स्वस्तिमाजी चाहिँदा आफै कुद्ने, नचाहिँदा पारो चढ्ने ?
नेपालमा अहिले फिल्म जगत जती भद्रगोल छ, त्यो भन्दा भद्रगोल पत्रकारिता जगत छ । युटुबको बढ्दो संख्यासँगै कलाकारले सामान्य भन्दा सामान्य गतिविधी गर्न पनि जोगिनु पर्ने अवस्था छ । कसले कतिबेला कहाँ के खिच्छ पत्तै हुँदैन ?
तर, कलाकारको शैली पनि उस्तै छ । आफूलाई चाहिने बेलामा कुन च्यानलमा इन्टरभ्यू दिइरहेको छु भन्ने समेत पत्तो नपाउनेहरु नचाहिने बेलामा संचारमाध्यम माथि पनि चिडिने गरेका छन् । अभिनेत्री आँचल शर्माले पत्रकारलाई इन्टरभ्यू नै दिन्न भनेपछि बढेको घटनाक्रम अब स्वस्तिमा खड्कासम्म आइपुगेको छ ।
स्वस्तिमाले पनि आफूलाई सुटिङ सेटमा फिल्मका सदस्यहरुले खोलेको युटुब च्यानले दिक्क बनाएको बताएकी छिन् । उनले, फिल्ममा काम गर्ने तर आफूलाई युटुब च्यानल पत्रकार भन्नेले गर्दा आफूलाई रिस उठेको पनि बताएकी छिन् ।
हुनत, स्वस्तिमको कुरा पनि सही छ । तर, कलाकारहरु आफूलाई चाहिने बेलामा, आफ्नो स्वार्थ परेको बेलामा पत्रकारसँग यति नजिकको सम्बन्ध बनाइदिन्छन् कि, भनिसाध्य छैन । तर, जब उनीहरुलाई दिक्क लाग्छ त्यतिबेला उनीहरु संचारमाध्यम माथि नै खनिन्छन् ।
पत्रकार र कलाकारविच दुरी हुन आवश्यक छ । चाहिने बेलामा सिमाना नाघिदिने, नचाहिने बेलामा मेरो छेउछाउ नै नआइज भनेर कराउनुको पनि खासै अर्थ रहदैन ।
२०७५ माघ २० गते १२:३९ मा प्रकाशित